DHAGAYSO: 15 Shabaab ah oo lagu qabtay iyagoo hub ku haysta magaalada Muqdisho
Taliska nabad sugida gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay dhalinyaro Shabaab ah oo watay hub ay doonayeen in ay amaan xumo ugu gaystaan magaalada Muqdisho. Ciidamada nabad sugida ayaa howlgalka ay ay la kaashadeen ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaa ay kusoo qab qabteen rag tiradooda ay gaarayso 15-ruux o dhamaantood falalka amnidarada ah ee ka dhaca Magaalada Muqdisho lagu eedeeyay. Howlgaladan...
Wararka ka imaanaya Magaalada Jowhar ee xarunta Gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada Dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa Nabadsugida ay gacanta ku dhigeen miinooyin kala duwan. Sida u warbaahinta usheegay Afhayeenka Maamulka Gobalka shabeelaha Dhexe daa’uud Xaaji Ciiro ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Nabadsugida ayaa howlgal kala duwan oo ay iska kaashadeen ay ugu suragashay...
Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Gedo ayaa si adag kaga hadlay arinta ku aadan maamulka loo samaynayo gobollada Jubooyinka. Dadaalo maamul loogu samaynayo deegaanada Jubbaland oo kala Jubbada Hoose , Jubbada Dhexe iyo Gobolka Gedo ayaa waxaa ay ka soconayaan gudaha Kismaayo iyo magaalada Nairobi. Isagoo lahadlayay qaar kamid ah saxaafada Afhayeenka Ahlu sunna ee Gobolada Koofureed Sheikh Maxamed...